Iibinta iyo Suuqgeynta Hadda waxay ku xisaabtamaan 48% Miisaaniyadda IT-ga | Martech Zone
Jimco, Diisambar 19, 2014 Jimco, Diisambar 19, 2014 Douglas Karr
Waxaan maqalnay tan in muddo ah, laakiin wali waa lagama maarmaan in shirkaduhu gartaan xaqiiqda ah in miisaaniyadaha suuqgeynta ay isbedelayaan. Shirkaduhu waxay sii wadaan inay maalgashadaan tikniyoolajiyadda suuq-geynta si ay uga caawiyaan soo-helitaankooda, haynta, iyo istiraatiijiyadda kor u qaadista iyadoon lagu darin ilaha aadanaha. In kasta oo maalgelinta IT-gu ay ugu horreyn tahay amniga iyo halista maalgashiga - haddii si kale loo dhigo, "waa in" - maalgashiga suuqgeynta ayaa sii wadaya dalbashada soo noqoshada maalgashiga iyo qiimeyn buuxda.
In kasta oo CIOs wali ay hogaaminayaan wadada marka loo eego maal gashiga IT, suuqleyda ayaa si dhaqso leh u soo qabanaya. Kharashaadka IT-ga ee ganacsigu hogaaminayo waxay u dhigantaa 40% miisaaniyadaha 'CIOs', sida lagu sheegay xog dhowaan ay soo saartay shirkadda latalinta ee CEB. Kharashaadkan ka sokow, suuqgeyn ayaa 25% u qoondaysay miisaaniyaddeeda tikniyoolajiyadda iibkuna wuxuu u qoondeeyay 23%. Toos News News
Joe Staples, CMO oo ah AtTask, oo ah bixiye softiweer maareyn shaqo ah oo loogu talagalay shirkadaha suuq geynta dhammaan noocyada, wuxuu la wadaagay fikradihiisa waxa ay mowjaddan tiknoolajiyadda cusub uga dhigan tahay xirfadleyda suuqgeynta:
Tiknoolajiyaddu had iyo jeer maahan wax lagu xalliyo: maamulayaasha suuqgeynta ayaa dhayalsan kara kharashyada iyo halista teknolojiyadda iyadoo aad loo qiimeynayo waxtarka alaabooyinka cusub qaarkood.
Sanado badan IT-ga shirkadu wuxuu ku dhacay dabinka lagu cabiro guusha marka la eego waqtiga, bixinta miisaaniyada ee awoodaha cusub, iyadoo la iska indhatirayo in awoodaha ay abuurayaan qiimo. Maamulayaasha suuqgeyntu waa inay ka digtoonaadaan isla dabinkaas: haddii teknolojiyadda aan si wax ku ool ah loo qaadan, shaqaaluhu way ku fashilmi karaan inay ka faa'iideystaan ​​faa'iidooyinka wax soo saar ee xalkaaga cusub ballanqaaday. Waa inaad ka fogaataa maalgelinta yar ee ku-isticmaalka ah oo aad mar walba tixgelisaa farqiga u dhexeeya shaqaalaha.
Samee xalal si looga caawiyo shaqaalaha inay wadaagaan oo ay horumariyaan tikniyoolajiyada - Marka loo barbardhigo IT-ga shirkadaha, shaqaalaha suuqgeyntu waxay u badan tahay inay helaan xalka ugu fiican ee wada shaqeynta iyo ka shaqeynta wax soo saar leh, laakiin sida caadiga ah ma wadaagaan farsamooyinkaan tiknoolajiyadda kooxdooda. Si tan looga gudbo, maamulayaasha suuqgeynta waa inay soo bandhigaan tikniyoolajiyada ay aqoonsadeen shaqaalahooda.
Tags: AtTasksarkaalka warbixinta ee madaxaciowararka suuq geynta tooska ahjoe staplesmiisaaniyadda suuqgeyntamiisaaniyadda iibkamiisaaniyadda tikniyoolajiyadda
Maxay yihiin aaladaha Suuqgeynta ee ugu Fiican?